Emirates Airlines iri kuve chiGiriki kuvaAmerican
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Emirates Airlines iri kuve chiGiriki kuvaAmerican
Airlines • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Greece Kupwanya Nhau • nhau • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kwete iyo yaimbova Airbus A380, asi Boeing 777 ichashanda kutangazve nzira yeEmirates kubva kuDubai kuenda kuAthens kuenda kuNewark, New Jersey, USA.
Emirates Airlines ndiyo ndege huru kwazvo muUnited Emirates uye iri muDubai
Pamberi pe COVID-19 denda Emirates yakashanda nendege dzinoverengeka dzisingamise kubva kuDubai kuenda kuNew York. Zvese izvi zvakabviswa
Nekudzokazve kwendege kuenda kuUnited States, nendege ichasanganisira Newark, asi nekumira muAthens nekodzero dzemigwagwa pakati peGreek neUnited States kutora mukana weiyi nzira inozivikanwa.
Emirates yakazivisa kuti ichadzokazve masevhisi ezuva nezuva kuNewark kuburikidza neAthens kubva ku1st Chikumi 2021. Ndege yatangwazve ichapa vafambi vepasirese imwe nzvimbo yekuenda kunharaunda inozivikanwa yeNew York Metropolitan, vachishandira nharaunda huru yeGreek-America muUnited States vachipa kubatana kwakaringana kune vafambi vakananga kuMiddle East, West Asia, uye Africa kuburikidza neDubai.
Kuwedzeredzwa kweNewark kuburikidza neAthens kunotora Emirates 'US network kuenda kunzvimbo gumi zvichitevera kutangazve kwemasevhisi kuSeattle, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York JFK, Washington DC, Dallas neSan Francisco (kutangazve 10nd Kurume).
Ndege yeA Dubai-Athens-Newark ichashanda zuva rega rega neyechitatu-kirasi Boeing 777-300ER, ichizadzisa Emirates 'mbiri zuva nezuva nendege kuNew York (JFK) sezvo ndege iri kuramba ichikura ichiyambuka North America. Kubatana kwakatangazve pakati peGirisi neUS kuchavhura gore rese kubatika, kunatsiridza kutengeserana, kusimudzira kushanya uye kubatsira vatengi kuburikidza nekuvapa sarudzo uye nyore. Emirates ichawedzera nendege dzayo kuenda kuguta guru reGreek, Atene, ichibhururuka zuva nezuva kutsigira sevhisi ichangotangwazve.
Emirates ndege EK209 ichasimuka Dubai kuma1050hrs, ichisvika muAthens kuma1500hrs isati yasimuka zvakare kuma 1735hrs uye ichisvika kuNewark Liberty International Airport kuma2120hrs pazuva rimwe chetero. Ndege yekudzoka EK210 ichasimuka Newark kuma 2355 hrs, ichisvika muAthens kuma1605hrs zuva rinotevera. EK210 ichasimuka zvakare kubva kuAthens zuva rinotevera pa1805hrs yakananga kuDubai uko kwaichasvika kuma 2335 hrs (nguva dzese ndedzemuno).
Emirates yakachengeteka uye zvishoma nezvishoma yakatangazve mashandiro pane yayo network. Sezvo zvakatangisazve zvakachengeteka chiitiko chekushanya muna Chikunguru, Dubai inoramba iri imwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo zororo, kunyanya mumwaka wechando. Guta rakavhurika kune vekunze bhizinesi uye vekutandarira vashanyi. Kubva kumahombekombe ezuva rakanyoroveswa uye zviitiko zvegariro kunzvimbo yepasirese yekugamuchira vaeni uye nzvimbo dzekuzorora, Dubai inopa akasiyana siyana epasirose-epasi zviitiko. Raive rimwe remaguta ekutanga epasirese kuwana chitambi cheKufamba Kwakachengeteka kubva kuWorld Travel uye Tourism Council (WTTC) - iyo inotsigira matanho akazara uye anoshanda eDubai ekuona hutano hwevaenzi uye kuchengetedzeka.
Kuchinja-chinja uye vimbiso: Emirates 'marongero emitemo anopa vatengi kushanduka uye kuvimba kuronga kwavo kufamba. Vatengi vanotenga tikiti yeEmirates yekufamba kana kana zvisati zvaitika 30 Gunyana 2021, vanogona kunakidzwa nerupo rebooking mazwi uye sarudzo, kana vachifanira kuchinja marongero avo ekufamba. Vatengi vane sarudzo dzekuchinja mazuva avo ekufamba kana kuwedzera yavo tikiti kushanda kwemakore maviri. Mamwe mashoko pano
Kufamba nechivimbo: Vatengi vese veEmirates vanogona kufamba vaine chivimbo uye rugare rwepfungwa neyekutanga indasitiri yendege, yakawanda-njodzi yekufambisa inishuwarenzi uye COVID-19 kavha. Ichi chifukidziro chinopihwa neEmirates pamatikiti ese akatengwa kana kubva 1 Zvita 2020, pasina muripo kune vatengi. Pamusoro pe COVID-19 chivharo chekurapa, ichi chazvino kupihwa kubva kuEmirates zvakare chine zvigadziriso zvezviitiko zvemunhu panguva yekufamba, chifukidzo chemitambo yechando, kurasikirwa nezvinhu zvako, uye kukanganiswa kwerwendo nekuda kwekuvharirwa kwenzvimbo yemhepo isingatarisirwe, kurudziro yekufamba kana mazano yakawanda-njodzi njodzi inishuwarenzi zvigadzirwa. Zvimwe zvisingabvumirwe uye zvinosarudzika zvinoshanda. Zvinyorwa zvePolisi uye rumwe ruzivo pano.
Hutano nekuchengeteka: Emirates yakagadzirisa seti yakazara yezviyero padanho rega rerwendo rwevatengi kuti ive nechokwadi chekuchengetedzeka kwevatengi vayo nevashandi pasi nepadenga, kusanganisira kugoverwa kwemakompiyiti ehutsanana ane masiki, magirovhosi, ruoko rwekuchenesa uye antibacterial wipes ku vatengi vese. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve aya matanho uye masevhisi anowanikwa pane imwe nendege, shanyira: www.emirates.com/yoursafety
Vatengi vanokurudzirwa kuti vatarise zviripo zvehurumende zvekufamba munyika dzavanobva uye nekuona kuti vanosangana nezvinodiwa zvekufamba kwenzvimbo yavo yekupedzisira.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro zvinoda kupinda zvevashanyi vekunze kuenda kuDubai kushanya: www.emirates.com/flytoDubai.